iMovie waa codsi software video tafatir ah by Apple in uu diyaar u yahay nidaamka aaladaha kale ee macruufka ah sida iPhone, iPad, iPod iPad Mini iyo taabashada iyo sidoo kale Mac. Waa mid ka mid ah qalabka tafatirka video caan ah oo u saamaxaya in aad xaalkaa aad videos by jarida, biirtay, lana siii oo ku daray saamaynta kala duwan. Waxaa jira qaabab in la jaanqaadaan iMovie sida MOV, DV, MPEG-4, MPEG-2 iyo M4V kala duwan iyo kuwa kale waxaad isticmaali kartaa Converter video ah inay wax ka bedesho qaabka video taas oo la jaan qaada iMovie. MP4 waa mid ka mid ah qaabka loo isticmaalo kaydsiga ee xogta warbaahinta iyo in kastoo iMovie taageeraan format, laakiin qaar ka mid ah ay version laga yaabaa in aan lagu taageeray by software ah. Hoos siiyo war dheeraad ah oo ku saabsan la mid ah.
Qaybta 1aad: Sida loo soo dhoofsadaan mp4 in imovie on Mac
Qeybta 2: Maxaad ah file video mp4 aan la keeno karo in imovie?
1: Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate waa Converter caan video in kale ee uu qabtaa soo diyaariyeen ee hawlaha kale ee sida tafatirka, hagaajinta, abaabulka, duuban oo qabsaday videos in ka badan 150 qaabab. Converter waa socon ee la shaqeynta Windows iyo sidoo kale nidaamka Mac. Software uu la kulmo baahida diinta oo dhan oo ay leeyihiin dhammaan qaababka in aad u baahan tahay si ay u sameeyaan oo wuxuu ku raaxaysan daawashada cajaladaha ah. Haddii aad jeceshahay inaad ku beddelato video ah in iMovie qaab socon si ay u sameeyaan tafatir lagama maarmaanka ah ka dibna waa doonistii Wondershare Video Converter Ultimate doorasho fiican. Waxaa jira qaababka kala duwan ee Converter tani in ay doortaan badnaayeen iMovie iyo hoos ka dhigaysa waa liiska isku mid:
Eeebana wax diinta qaab MP4 in iMovie: Waxaa jira qaabab MP4 qaar aan si toos ah ula iMovie iyo xaaladaha sida shaqeeyaan, Wondershare Video Converter Ultimate iyaga badalo karaa qaab socon.
Wondershare Video Converter Ultimate Kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo dejinta videos ka cajalad kaamirada ku salaysan in iMovie
Waxay awood u aad si loogu badalo iyo videos dejinta ka kaamirada xusuusta ku salaysan
Wondershare Video Converter Ultimate Sidoo kale loogu badalo karaa videos qaab duwan yihiin taas oo la jaan qaada iMovie.
Waxa kale oo aad u bedeli karaan oo dajiyaan YouTube videos in iMovie
Wondershare Video Converter Ultimate Sidoo kale awood u aad u dajiyaan sawirada iyo files audio in iMovie
Waa awood diinta ka badan 400 oo ah qaabab in kuwa socon iMovie iyo in sidoo kale aan khasaaro ka mid ah oo tayo leh.
2: Sida loo sameeyo
Hoos siiyo waa tallaabooyinka si loogu badalo iyo MP4 dejinta inay iMovie isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate
Talaabada 1: dejinta mp4
First of dhan aad u baahan tahay inaad ku shuban aad file warbaahinta MP4 in Wondershare software. Marka browser warbaahinta ayaa la siiyaa, waxaad si fudud u helo karo files warbaahinta maxalliga ah ka dibna si fudud kuwaa daaqaddii barnaamijka.
Talaabada 2: dooran imovie qaab socon
Hadda tallaabada xigta waa in la badalo videos MP4 in ay qaabkan u taas oo la jaan qaada iMovie. Riix qaab icon hoose oo muujin doona guddiga wax soo saarka leh ee kala duwan video iyo maqal ah qaabab ka. Laga soo bilaabo liiska ay doortaan mid ka mid ah kaas oo la jaan qaada iMovie sida MOV, M4V iyo kuwa kale.
Talaabada 3: badalo mp4
Marka aad soo xulay qaab la doonayo, guji "Beddelaan" doorasho iyo ka dibna tag "Dhoofinta" iyo "Start" iyo diinta video in iMovie qaab socon bilaabi doono
Talaabada 4: dejinta badaley mp4 in imovie
Marka aad MP4 video waxaa ku badaley, oo talaabooyinka xiga waa in ay dajiyaan in iMovie ah. Wixii galinta aad u baahan tahay si ay u tagaan si ay ugu File> Import> Movies doorasho.
MP4 waa mid ka mid ah kordhinta caanka ah ee xogta, taas oo kala duwan oo warbaahinta offline iyo sidoo kale online waxaa lagu badbaadiyey. Marka aad rabtid in aad wax ka bedel file MP4 aad la iMovie ka dibna waxaa jira waqtiyo waxaad Mudantihiin inaad Liibaantaane laakiin sidoo kale waxaa jira xaalado marka laga yaabaa in aad in aanay awoodin inay dajiyaan files kuwan. Hoos siiyo yihiin sababaha ah file video MP4 aan la keeno karo in iMovie.
Sababta 1: The software iMovie taageeraan kaliya dhoofinta MP4 video files leh MPEG4 / AAC ama H.264 / data AAC iyo qaabab kale oo aan MP4. Markaa hadii file MP4 waa ka fiidiyo Hybrid, Sony ama qalab kale oo ay aan la aqbali karin oo ay iMovie.
Sababta 2: Si loo akhriyo files MP4 ah, iMovie ku jira oo dhan codecs lagama maarmaanka ah iyo sidaas haddii ay jiraan wax codec kala duwan ee Cinwaan ama audio video markaas waxaa jiri doona dhibaato in loo dhoofiyo file MP4 ah.
Sida loo soo dhoofsadaan mkv in imovie
6 Apps Si Isticmaal Pro Goo Final From iPad
> Resource > FCP > Sida loo soo dhoofsadaan mp4 in iMovie